Soo dejisan Tunngle 5.8.9 – Vessoft
Qeybta: Muuqaalada ciyaaraha
Tunngle – software ah in la abuuro shabakad hoose iyada oo internet ah. Software ayaa isku daraa kombiyuutarada oo ku xiran yihiin Internet-ka oo awood u isticmaala in ay ku xidhmaan shabakadaha ciyaaraha kala duwan kuwaas oo loo qaybiyey qaybaha iyo noocyo. Tunngle kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan profiles, farriimo sarrifka iyo ciyaaraha soo dhaafay news warshadaha caleenta. Software ayaa sidoo kale u saamaxaaya in ay abuuraan shabakadaha gaarka loo ilaaliyo sirta ah. Tunngle ku jira tiro badan oo ah qalab si Customize bandhigay ee advertising, fursadaha iyo muuqaalka ee software-ka.
In la abuuro shabakad hoose iyada oo internet ah
In la abuuro shabakad amaan
Tiro badan oo ah qalab reserved
Soo dejisan Tunngle
Faallo ku saabsan Tunngle
Tunngle Xirfadaha la xiriira
The madal kulanka caanka ah ula tiro badan oo ka mid ah kulan ee caanka ah ee qaybaha kala duwan. software The u saamaxaaya in ay xiriiro iyo ciyaartoyda kale iyada oo loo marayo internet-ka ciyaaro.
Tool download kulan shirkadda Ubisoft. Software wuxuu kuu ogol yahay inaad la xiriirto ciyaaryahan kale oo u Yeedhaan iyo inuu u ciyaaro.
Kani waa maamulaha sirta si loo xakameeyo xogta shaqsiyadeed iyo lambarka sirta. Software wuxuu awood u leeyahay inuu abuuro furaha ereyada adag iyo buuxi foomamka shabakadda.
software ah in garab la gelin xogta account aad adigoo buuxinaya foomamka web si toos ah. software The buuxiyo foomamka diiwaangelinta la mid click.
Manycam – barnaamij softiweer ah oo ku soo rogaya saamaynta muuqaalka kala duwan ee baahinta fiidiyowga. Software-ka wuxuu awoodaa inuu isticmaalo hal kambuyuutar si uu ugu baahiyo barnaamijyo badan.